Sense V2 Flip Clock & Weather 4.96.01 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 4.96.01 လြန္ခဲ့ေသာ 8 လက
Application မ်ား ရာသီဥတု Sense V2 Flip Clock & Weather
Sense V2 Flip Clock & Weather ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Sense သည် V2 Flip နာရီ & မိုးလေဝသဟာ feature ပြည့်စုံဒစ်ဂျစ်တယ်နာရီများနှင့်ရာသီဥတုခန့်မှန်းချက် application ဖြစ်ပါတယ်
-3ဝစ်ဂျက်အရွယ်အစား, 4x2 နှင့် 4x3 ။ 5x2
- (optional ကို) အဝစ်ဂျက်အပေါ်လာမည့်နှိုးဆော်သံနှင့်ရက်သတ္တပတ်အရေအတွက်အားပြသရန်
- အများအပြားကဝစ်ဂျက်ကိုဟော့စပေါ့ (သူတို့ထဲကအများစုဟာတိကျတဲ့ applications များဖွင့်ဖို့အသုံးပြုသူသတ်မှတ်ထားသောနိုင်ပါသည်)
- အလိုအလျောက် (ဆဲလ် / wifi သို့မဟုတ် GPS ထံမှ) တည်နေရာသို့မဟုတ်လက်စွဲစာအုပ်
- အလိုအလျောက်ရာသီဥတု update ကိုကြားကာလ (15 မိနစ်, 30 မိနစ်, 1, 2, 4, 6, 8 နာရီ) သို့မဟုတ်လက်စွဲစာအုပ်
- နာရီပြောင်းလဲမှုအကြောင်းကြားစာ option ကို
- အောက်ပါတို့ပါဝင်သည်ကြောင်းအသေးစိတ်လက်ရှိရာသီဥတုခန့်မှန်းချက် display:
- (လက်ရှိတည်နေရာများအတွက်) ဒေသခံအချိန်
- မိုးရွာရွာ, နှင်းအမှတ်, မြင်ကွင်း, ခရမ်းလွန်အညွှန်းကိန်းနှင့်လေအခြေအနေစို, ဖိအား, အခွင့်အလမ်း
- နောက်ဆုံးရာသီဥတု update ကိုအချိန်
- ရာသီဥတုအရသိရသည်နောက်ခံအခြေအနေနှင့်နေ့ / ညဥ့်
- လက်ရှိလအဆင့်၏ Optional display ကို
- 24 အလုပ်ချိန်နာရီရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်
- 24 နာရီတိုင်းလေတိုက်ခန့်မှန်းချက်
-7နေ့ကအနာဂတ်ခန့်မှန်းချက်
- 30 နေ့ကလအဆင့်ပြက္ခဒိန်
- မိုးရွာရွာ၏အနာဂတ်ခန့်မှန်းချက်အသေးစိတျ (နေထွက်, နေဝင်ချိန်, လအဆင့်, လေတိုက်, စိုထိုင်းဆများနှင့်အခွင့်အလမ်း
- ကမ္ဘာ့ဖလားရာသီဥတု: ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ကွဲပြားခြားနားသောနေရာများတွင်မဆိုအရေအတွက်ရာသီဥတုသတင်းအချက်အလက်ဖော်ပြရန် Choose
အာဖရိက, العربية, български, Bahasa အင်ဒိုနီးရှား, বাংলা, Català, 中文 (简体), 中文 (繁體), Hrvatski, Čeština, Dansk, Nederlands, Suomi, Français, Deutsch, Ελληνικά, עברית, Magyar, Italiano, 한국어, Lietuvių, македонски, Norsk, Polski, Português (ဘရာဇီး), Português (ပေါ်တူဂီ), Română, русский, Српски (Ћирилица), Srpski (Latinica), Slovenčina, Slovenščina, Español (စပိန်), Svenska, ไทย, Türkçe, Українська , TiếngViệt
e-mail, ကနေတဆင့်မည်သည့်ပြဿနာမျှ, အကြံပေးချက်များသို့မဟုတ်တောင်းဆိုမှုများကိုသတင်းပို့ ကျေးဇူးပြု.
Sense V2 Flip Clock & Weather အတြက္ စတိုးအသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Sense V2 Flip Clock & Weather အေပၚ စတိုး ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Sense V2 Flip Clock & Weather အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Sense V2 Flip Clock & Weather အား အခ်က္ျပပါ
apps စတိုး 2.71M 3480.39M
Sense V2 Flip Clock & Weather ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Sense V2 Flip Clock & Weather အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 4.96.01
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.machapp.net/privacy.html
App Name: Sense V2 Flip Clock & Weather
Release date: 2018-12-08 00:47:49
လက်မှတ် SHA1: BD:B5:89:A2:83:02:FB:CA:84:D7:66:BB:53:FD:1C:DF:E0:40:E0:81
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Athos Perentos
နယ်မြေ (L): Limassol
နိုင်ငံ (C): CY
Sense V2 Flip Clock & Weather APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ